3D makiazy sy hosodoko amin'ny vatana izay hampiaiky volana anao | Famoronana an-tserasera
3D makiazy sy hosodoko amin'ny vatana, mahafinaritra!
Hatramin'ny andro taloha, ny olombelona dia nampiasa loko isan-karazany mba handravahana ny vatany amin'ny tanjona samihafa. Tamin'ny vanim-potoana talohan'ny vanim-potoana dia inoana fa ny fampiasana makiazy dia nifandraika tamin'ny fankalazana ny fandevenana sy ny fanaovana fombafomba samihafa, raha tamin'ny vanim-potoana ejiptiana (i Egypt dia heverin'ny maro ho fanaka makiazy) dia nampiasaina hanatsarana ny hatsarana, toy ny ary koa mba hiarovanao tena amin'ny masoandro mahery any an'efitra.
Amin'izao fotoana izao, raha misy karazana makiazy izay mendrika antsoina hoe tena sangan'asa, izay tsy isalasalana fa makiazy 3D, ary koa sary hoso-doko.
2 Manaingo amin'ny refy telo
«Vi» avy amin'i antonino tumminia dia nahazo alalana tamin'ny CC BY-NC 2.0
Fanoratan-tarehy Izy io dia endrika fanehoana zavakanto izay mifototra amin'ny fametahana loko amin'ny vatana iray manontolo na amin'ny ampahany aminy, mamorona lamina sy endrika samihafa. Teknika iray izay sarotra kokoa noho ny fahitana azy voalohany, satria ny vala sy ny sisin-tany amin'ny faritra samihafa amin'ny vatana dia mamaritra ny safidin'ny sary hosodoko amin'ny vatana.
Amin'ity teknika ity dia zava-dehibe izany mampiasa loko izay tsy misy poizina amin'ny hodintsika ary azo esorina mora amin'ny savony sy rano koa izy ireo (tsy maintsy soloina anaty rano izy ireo).
Matetika mandany fotoana be hanaovana izany ny mpanakanto manao hosodoko vatana. Ho fanampin'izay, afaka mampiasa teknika samihafa izy ireo, ny mahazatra dia ny fampiasana ny borosy.
Teknika iray hafa dia, ohatra, ny fampiasana latsa-jaza sy ny silika. Latex dia vokatra tsara ho an'ny famaritana toetra sy ny effets effets effets et effets, noho ny hamafin'ny antonony ary miaraka amin'izay koa ny elastika, izay mamela azy hamolavola amin'ny fomba maro samihafa. Ho fanampin'izay, vokatra azo avaozina izy io. Latex dia hamela antsika hamorona na manova izay faritra amin'ny vatana amin'ny fampiasana prosthetika na sarontava.
Teknika iray hafa izay hamela anao hamorona makiazy mahatalanjona dia ny fampiasana ny airbrush. Basy fanerena izy io, izay ahafahantsika manao sary tena marina sy haingana.
Variant izay lamaody kokoa noho ny taloha dia ny sary hoso-doko. Izy io dia momba ny fahatsapana ny hosodoko amin'ny kibon'ny vehivavy bevohoka. Matetika ny sary dia natao tamin'ny heviny manokana ary izany dia hiteraka fahatsiarovana tsara ho an'ny taranaka.
Manaingo amin'ny refy telo
Nalaza be tao amin'ny media sosialy ireo mpanakanto makiazy 3D. Makiazy manaitra sy azo antoka izay miteraka effets optika tsy azo tanterahina. Azontsika atao ny milaza fa miovaova amin'ny makiazy nofinofy izy io, izay mamela antsika hamela ny eritreritsika hivezivezy
Raha misy mpanakanto misongadina amin'ity sehatra ity dia tsy isalasalana fa izany Mimi choi, izay mitety an'izao tontolo izao mampiseho ny zava-kanto kanto vitany, izay matetika dia sarin-tena.
Mimi Choi koa dia mampifangaro ny makiazy 3D misy endrika miavaka sy zavatra ivelany, mamorona sary tsy azo antoka tsy hita izay mbola hitany, ka nampitombo ny vokatr'ilay makiazy.
Mpanakanto make-up iray hafa izay misongadina amin'ity sehatra ity dia Dain yoon. Ny zavatra noforoniny koa dia tsy hita maso ary mitovy endrika amin'i Mimi Choi's. Ity mpanakanto makiazy ity matetika dia mampifangaro ireo zavakanto malaza amin'ny makiazy, toa ny Matisse's Dance na ny sarin'i Van Gogh.
Tsy isalasalana fa ny fampiasana karazany iray na make-up hafa dia hahafahantsika mamorona endri-tsoratra tsy manam-petra ho an'ny sinema, teatra, fanaovana dokambarotra… ary snsetera lava. Tsy misy fetrany ny sary an-tsaina, satria tsy hita lany ny vokatra marobe eny an-tsena. Afaka mamorona amin'ny latina isika, miaraka amin'ny airbrush na amin'ny borosy tsotra.
Manao ny iray amin'ireto makiazy 3D na vatana ireto, Zava-dehibe, voalohany indrindra, ny manamboatra sary amin'ny endrika izay tiana hamorona. Azonao atao ny mitady makiazy hafa efa vita, sary na sary mety hanampy anao. Aza adino ny manisy fiheverana ny vala sy ny fialan-tsasatry ny vatana. Mitadiava loko mety sy azo sasana ary tsy manimba ny hoditrao.
Inona no andrasanao hanombohana ny sangan'asa kanto anao? Tsy misy fetra ny famoronana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » 3D makiazy sy hosodoko amin'ny vatana, mahafinaritra!
Ahodina ny lamba sy ny tonga lafatra tonga amin'ny Photoshop amin'ny iPad